Vaovao - Ny kaontin'i Danyang City dia mombamomba ny varotra ivelany hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny Jona 2020
Danyang City ny angon-drakitra fifanakalozana varotra vahiny hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny Jona 2020
Nanomboka tamin'ny Janoary ka hatramin'ny Jona 2020, ny sandan'ny importa sy ny fanondranana solomaso Danyang dia 208 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 2,26% isan-taona, mitentina 14,23% ny sandan'ny import sy export an'i Danyang. Anisan'ireny, ny fanondranana solomaso dia 189 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 4,06% isan-taona isan-taona, mitentina 14,26% ny sandan'ny sandan'ny Danyang; ny fanafarana solomaso dia 19 tapitrisa dolara amerikana, fisondrotana 26,26% isan-taona, mitentina 13,86% ny sandan'ny importan'i Danyang.
(Loharanom-baovao: Biraon'ny ladoany Zhenjiang ao Danyang)
[Data] Ny zava-misy eo amin'ny import sy export ny vokatra solomaso nasionaly isan-karazany hatramin'ny Janoary hatramin'ny Jona 2020
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona 2020, ny fanondranana vokatra solomaso any Sina (tsy anisa fitaovana sy fitaovana) dia nahatratra 2,4 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 13,95% isan-taona. Avy amin'ny famakafakana ireo sokajy vokatra eyewear: ny fanondranana solomaso, ny solomaso famakiana ary ny solomaso optika hafa dia US $ 1,451 miliara, fihenan'ny 5,24% isan-taona isan-taona, mitentina 60,47% ny totalin'ireo (izay ny fanondranana solomaso dia $ 548. tapitrisa, fihenan'ny 34.81% isan-taona, 22,84% amin'ny totalin'izy ireo); Ny fanondranana ny frame dia 427 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 30,98% isan-taona, 17,78% ny totaliny; ny fanondranana solomaso solomaso dia 461 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 15,79% isan-taona isan-taona, nahatratra 19,19% ny totaliny.
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jona 2020, ny fanafarana vokatra solomaso any Shina (tsy misy fitaovana sy fitaovana) dia 574 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 13,70% isan-taona. Nodinihina avy tamin'ny sokajy vokatra eyewear: ny fanafarana solomaso, ny solomaso famakiana ary ny solomaso hafa dia 166 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 19,45% isan-taona, mitentina 28,96% amin'ny totaliny;
58 tapitrisa dolara amerikana ny fanafarana zana-kazo fampisehoana, fihenan'ny 32,25% isan-taona, 10,11% amin'ny totaliny; ny fampidirana solomaso solomaso sy ny banga dia $ 170 tapitrisa US, fihenan'ny 5,13% isan-taona, 29,59% amin'ny totaliny; Ny masom-pifandraisana kornea dia 166 tapitrisa dolara amerikana, fihenan'ny 1,28% isan-taona isan-taona, 28,91% amin'ny totalin'izany.